धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष : कार्यविधिबिना नै पाँचजनालाई अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइयो
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस समितिले ‘सर्टलिस्र्ट’ गरेका आवेदकहरूलाई अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको छ । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले बुधबार अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा एक सूचना प्रकाशित गर्दै छनोट भएका उमेदवारलाई अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइएको छ ।
आवेदकहरूको शैक्षिक योग्यता, अनुभव, तालिम र व्यावसायिक कार्ययोजनाको परीक्षणबाट प्राप्तांकको प्राथमिकताका आधारमा छनोट भएका आवेदकहरूलाई व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतिकरण तथा अन्तर्वार्ताका लागि कृष्णराज पोख्रेल, खगेन्द्र कटुवाल डा. गोपालप्रसाद भट्ट, निरज गिरी र रमेशकुमार हमाललाई छनोट गरिएको सिफारिस समितिको सूचनामा उल्लेख छ ।
“छनोट भएका उमेदवारहरूको व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतिकरण तथा अन्तर्वार्ता देहायको मिति, समय र स्थानमा हुने व्यहोरा जानकारी गराउँदै उक्त दिन आफूले पेस गरेका प्रमाणपत्र तथा अन्य कागजातका सक्कलै प्रतिसहित उपस्थित हुन समेत सूचित गरिन्छ,” सूचनामा भनिएको छ ।
सिफारिस समितिले फागुन १ गते छनोट भएका पाँचजनालाई अन्तर्वार्ताका लागि छनोट तथा सिफारिस समितिको संयोजक राष्ट्रिय योजना आयेगका उपाध्यक्ष विश्वराज पौडेलको सचिवालयमा बोलाइएको छ ।
कुल आवेदन दिएका १५ जना मध्येबाट सिफारिस समितिले पाँचजनालाई छनोट गरी अन्तर्वार्ताका लागि बोलाए पनि कुन कार्यविधिलाई आधार बनाएर पाँचजनालाई छनोट गरिएको भन्ने अन्योल छ ।
अध्यक्षको नियुक्तिका लागि गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले अध्यक्षका लागि ०७८ पुस १५ गते दरखास्त आह्वान गर्दै ‘नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनोट तथा सिफारिस कार्यविधि, २०७८’ अनुसार आवेदन पेस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । सिफारिस समितिले कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहने भने पनि अहिलेसम्म मन्त्रालयको वेबसाइटमा कार्यविधि नै छैन ।
सिफारिस समितिले १५ दिनको म्याद दिएर आवेदन खुलाएको १२ दिनपछि पुस २६ गते कार्यविधि बनाएर मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखेको थियो । जसमा सिफारिस समितिको संयोजक वा सदस्य कसैको पनि हस्ताक्षर थिएन । सिफारिस समितिले दुई दिन नबित्दै पुस २८ गते उक्त कार्यविधि हटाएर सिफारिस समितिका संयोजक पौडेलको हस्ताक्षरसहित अर्को कार्यविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमा राख्यो । यसरी कार्यविधि परिमार्जन गरेपछि चर्को आलोचना हुँदा अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको उक्त कार्यविधि नै लुकाइयो ।
अहिले पनि मन्त्रालयको वेबसाइटमा सिफारिस समितिले अध्यक्ष सिफारिसका लागि मूल्यांकन गरेको कार्यविधि छैन । त्यसैले सिफारिस समितिले कुन कार्यविधिका आधारमा पाँचजनालाई छनोट गरेर अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइएको भन्ने प्रस्ट छैन ।
अर्कोतर्फ, सिफारिस समितिले विगतको अभ्यासविपरीत आवेदकको व्यावसायिक कार्ययोजनाको मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी एक व्यक्तिलाई मात्रै दिइएको भन्दै आलोचना भएको छ । आवेदकको मूल्यांकनको समग्र अंकभार १५० रहेकामा ५० अंकभार व्यावसायिक कार्ययोजनाको छ । जसको मूल्यांकन गर्ने जिम्मा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीलाई दिइएको थियो ।
छनोट भएका पाँचजनामध्ये डा. गोपाल भट्ट पुँजीबजारका विशेषज्ञ हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक समेत रहेको भट्ट पुँजीबजारमा नै विद्यावारिधि गरेका व्यक्ति हुन् । उनी धितोपत्र बजारका सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धानमा समेत संलग्न छन् । विषयगत ज्ञानका आधारमा भट्ट बोर्ड अध्यक्षका बलियो दाबेदार हुन् ।
यस्तै, निरज गिरी बोर्डकै वर्तमान कार्यकारी निर्देशक हुन् । उनी अनुभवका आधारमा खारिएका पात्र भए पनि बोर्डकै कर्मचारीले भने उनलाई त्यति रुचाएको देखिँदैन ।
कृष्णराज पोख्रेल पनि बोर्डकै उपकार्यकारी निर्देशक हुन् । उनी व्यावसायिक कार्ययोजना मूल्यांकन गर्ने कार्की बोर्डको अध्यक्ष हुँदा उनको सबैभन्दा नजिकका विश्वासपात्र समेत रहेका थिए ।
तेह्रथुम स्थायी घर भएका खगेन्द्र कटुवाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक हुन् ।
रमेश हमाल भने पहिले गैरआवासीय नेपाली रहेको खुलेको छ । उनी सुदूपश्चिम प्रदेशको भए पनि हाल ललितपुरमा बस्दै आएका छन् । केही व्यावसायिक घराना र बिचौलियाको समूहले हमालको पक्षमा लबिङ गरेको स्रोतको दाबी छ ।